Bioinformatics Professionals Job ọrụ Template – JobDescriptionSample
Home / Nkọwa ọrụ / Bioinformatics Professionals Job ọrụ Template
Bioinformatics Professionals Job ọrụ Template
superadmin June 18, 2016 Nkọwa ọrụ Nkume a comment 268 Echiche
Architectural Drafters Job Template
Earth na ebe ọkachamara Job ọrụ Sample
Nyochaa Researchers Work Description Template
Ẹda nchoputa iji bioinformatics ụzọ na amụma n'ebe ihe atụ ọgwụ, ọgwụ teknụzụ mgbakọ bayoloji, proteomics bayoloji . Nwere ike okirikiri nhọrọ ukwuu inweta formulas maka inyocha na nhazi genomic ọmụma, ma ọ bụ ọzọ organic ọmụma na Ndepụta.
Nọgidenụ na-abreast nke instrumentation, ọhụrụ biochemistries, ma ọ bụ software site na ịga mgbakọ na-ọkachamara na-enyocha ọgwụ ihe.
Dọhọ ndekọ na mgbakọ ngwá biologically dabeere nchụso ndị dị otú ahụ dị ka ihe atụ butere n'aka analysis, mba nke mkpụrụ ndụ ihe nketa-okwu, na site n'usoro ọrụ mkpebi.
Eduzi ọrụ ndị ozi technology pesonel mmejuputa na ndị ọkachamara bioinformatics nzube ma ọ bụ ngwá ọrụ na ebe dị otú ahụ dị ka ihe atụ bioinformatics na bụ ọgwụ, transcriptomics, metabolomics, na proteomics.
Mepụta ọhụrụ kọmputa mmemme ma ọ bụ hazie ugbu software ka afọ ju kpọmkwem adakarị ọrụ chọrọ.
Mepụta data aghụghọ na Ndepụta.
N'ịwa ma ọ bụ gbanwee web dabeere bioinformatics ụzọ.
Style na ahu nagide bioinformatics algọridim tinyere unsupervised na ekwu igwe mmụta, vibrant development, ma ọ bụ onyeōzi algọridim.
N'ịwa ọhụrụ mgbakọ ụzọ Ịhazi ụzọ ndị dị ka-achọrọ site na research zaa.
Ikpokọta Ama ga-eji na-eme ihe atụ bioinformatics na bụ bughi na site n'usoro okwu àgwà.
Mkparịta ụka research uru site ọgwụ Akwụkwọ, mbono n'ihu, ma ọ bụ ọrụ na-akọ.
Mmetụta dị ọtụtụ ebe, azụmahịa proteomic -genomic Ndepụta.
Lelee na nnyocha iji chọpụta mbipụta, Abigel teknụzụ na-eche nanị azịza, ma ọ bụ igosi usoro bụ mgbakọ.
Tụlee nnukwu datasets dị otú ahụ dị ka ihe atụ genomic usoro data eke data, na data data banyere adakarị ma ọ bụ isi nnyocha ọrụ.
Nwere ike ikwu arụmọrụ mbo mbuli.
Na-achọ ndụmọdụ si na ngalaba dị ka ihe atụ na-akwalite, azụmahịa mmepe, na arụmọrụ gakọrịta ngwaahịa mmepe ma ọ bụ na-enwe ọganihu.
Imekota eji software programmers na mgbanwe na ọganihu nke bioinformatics software na bụ azụmahịa.
Nnyocha bioinformatics onwunwe na ọhụrụ na ngwa.
Mee nchịkọta ọgụgụ nke eziokwu banyere ndị mmadụ genomes.
Gwa ndị ọzọ nọ n'ime agwaogwa na-eji ngwá ọrụ ndị na-bioinformatics.
Dịkwuo onye ihu na bioinformatics software na Ndepụta.
Job nchụso Mkpa
Agụ ịghọta-ịghọta edoghi na njikere paragraf na-arụ ọrụ metụtara akwụkwọ.
Active-ege ntị na-enye dum maara ihe na ndị ọzọ na-ugbu a si, na-ewere oge gị na-aghọta ihe a na-kere, ịjụ ajụjụ ajụjụ ndị dị ka ndị kwesịrị ekwesị, na bụghị igbochi anyị na ufodu na-ekwesịghị ekwesị.
Ekwusara-Ịgwa ọma na-ede bụghị dị ka na-ekwesịghị ekwesị maka chọrọ nke na-ege ntị.
Ịgwa-Ịgwa ndị ịkọrọ ọmụma effortlessly.
Mathematics-Iji mgbakọ na mwepụ idozi nsogbu.
Research-Iji ngwọta na nkà mmụta sayensị na iwu idozi mbipụta.
Critical-Echiche-Iji ihe mere na-eche echiche ịmata na-eme na ọghọm nke na-eru nso, ubiere ma ọ bụ ọzọ na ngwọta na nsogbu.
Active-Learning-Ịmara mmetụta nke ọhụrụ ọmụma ma ẹdude na-eme n'ọdịnihu-edozi nsogbu mkpebi na.
Ịmụta eru Nso-buru na itinye ozizi / izi ụzọ na ụzọ ziri ezi n'ihi na nsogbu ahụ mgbe na-amụ ma ọ bụ ịnye ọzụzọ ihe ndị na-ọhụrụ.
Ịlele-TrackingPEREvaluating arụmọrụ nke onwe gị, mmadụ na-dị iche iche, ma ọ bụ ụlọ ọrụ buru remedial ihe ma ọ bụ n'ịwa ndozi.
Social Perceptiveness-Ịmara othersA Ibọrọ na ịghọta ihe mere ha mere mgbe ha na-eme.
Nchikota-agbanwe omume na ekele ndị ọzọ’ jikoro.
Eru n'obi-Irè ndị ọzọ ịgbanwe àgwà ma ọ bụ ụbụrụ ha.
Mkpakorita-Ịzụlite ọzọ jikotara aka wee na-achọ ịghọta variances.
Aka-Izi ndị ọzọ dị nnọọ esi mee ka a aga.
Company Usoro-ifịk ifịk na-achọ na-eru nso na-enyere ndị mmadụ n'otu n'otu.
Advanced edozi nsogbu-iche mgbagwoju isi ike na-eme nnyocha data nke metụtara mejuputa nhọrọ na ịzụlite na-amata selections.
Ulo oru Evaluation-Inyocha achọ ngwá ahịa kwesịrị ime a imewe.
Engineering Design-n'ịgbanwe ngwaọrụ ma ọ bụ na-amụba na technology na-arụ ọrụ mmadụ chọrọ.
Gear Nhọrọ-Ikpebi ụdị ngwá na ngwaọrụ mkpa ime a na-arụ ọrụ.
Nkeji nkeji-agbakwụnye, mmemme, ngwaahịa, wires, ma ọ bụ ngwaọrụ ka afọ ju nkọwa.
Nzuzo-ya dee kọmputa ngwa maka dị iche iche ngwa.
Operations Monitoring-Ilele ọzọ n'ókè, Isi, ma ọ bụ egosi iji jide n'aka na e nwere onye na ngwa oru ugbu a na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi.
Usoro na Control-Igbochi ọrụ ngwá ma ọ bụ usoro.
Equipment Mmezi-Ime bụkwanụ na bụ na-eme na ngwá na-ekpebi mgbe.
Nchọpụta nsogbu-ikpebi ihe n'azụ glitches na-ijikwa na-ahọpụta otú n'ihu banyere ya.
Ịrụzi-ịrụzi ụdị ma ọ bụ usoro na-eji oké mkpa ụzọ.
Quality-Control Research-Ịrụ ​​inspections na nnwale nke ibu, ọrụ, ma ọ bụ usoro na-ekpe ikpe irè ma ọ bụ àgwà.
Amamihe na mkpebi-Ichebara general expenses na uru nke nwere omume ga-ahụ onye na-kasị kwesị ekwesị.
Analysis-ikpebi ụdị omume kwesịrị na-arụ ọrụ na otú ndozi na gburugburu ebe obibi, ọrụ, nakwa dị ka ọnọdụ pụrụ mmetụta uru.
Ụzọ Evaluation-Ịmata nzọụkwụ ma ọ bụ na-egosi nke arụmọrụ nakwa dị ka nzọụkwụ nwere na mkpa ka mma ma ọ bụ nke ziri ezi arụmọrụ, ikwu na ihe mgbaru ọsọ nke ngwaọrụ.
Time-Management-n'Ịchịkwa oge nke ndị ọzọ ma na ihe ọ na-oge.
Nlekọta nke ego-ikpebi otú ego ga-adịghị anya-nọrọ na-rụpụtara, na aza ajụjụ maka ndị a expenditures.
Management of Ihe Sources-Inwe na inweta na kwesịrị ekwesị itinye n'ọrụ nke atụmatụ, ngwaọrụ, na onunu mkpa ime akpan akpan ọrụ.
Supervision of Ọrụ Resources-Building, na-agba ume, ma na-eduzi folks n'ihi na ha na-arụ ọrụ, ekpebi ihe ndị kasị mma mmadụ maka ọrụ unu.
ọzụzụ Iwu ahụmahụ Iwu
N'ime 2 afọ, elu-na na gụnyere ụfọdụ afọ
Ọrụ Control Nkà Iwu
Ịtachi – 90.20%
enyemaka – %
Ihe banyere ndị ọzọ – 78.96%
Njikpa onwe – 85.71%
Pressure fọrọ – 84.11%
ikwesị ntụkwasị obi – 92.37%
Ntị Nkọwa – 91.72%
ike – 89.80%
gbasara nyocha Echiche – 97.00%
Tags Nkọwa ọrụ
Previous Green oru buu igba n'ulo Job Description Sample
Osote Graders Ma Sorters, Agricultural Products Job Description / Ọrụ Na ọrụ Sample
Automotive Engineers Work Description Template
Nweta ọhụrụ ma ọ bụ mma ụkpụrụ maka ụgbọala ụkpụrụ ụlọ ahịa, Motors, transmissions, ma ọ bụ ọzọ ụgbọ ala ụzọ, …
© Copyright 2018, Ikike niile echekwabara